Semalt: Google मा XML र छवि साइटम्यापहरू कत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्?
गुगलले यसको सामग्रीलाई सकेसम्म दृश्यवान बनाउने कोशिश गरिरहेको छ। गुगल SERP मा अधिक छवि सुविधाहरूको रूपमा, XML र छवि साइटम्यापहरूको आवश्यकता बढेको छ, विशेष गरी यात्रा, ई-वाणिज्य, र अन्य खोज क्वेरीहरूको बीचमा जहाँ खोजीकर्ताले आफूले खोजिरहेको उत्पादको बहु दृश्यहरूको आशा गर्दछ।
मोजले एसईआरपी फीचर ईतिहासबाट केहि तथ्या .्कहरू प्रकट गर्दछ, जसले प्रदर्शनबाट अन्तिम 30० दिनमा Google खोज प्रश्नहरूको in०..7% तिनीहरूमा छविहरू देखायो। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन। हामीले भने जस्तै, गुगलले छविहरू हरेक अवसरको साथ प्रयोग गर्ने आशा गर्दछ।
तर किन यो यस्तो छ?
तपाईंलाई किन XML साइटम्याप आवश्यक छ?
XML साइट प्रोटोकल पहिलो पटक २०० 2005 मा खोज इञ्जिनहरू द्वारा सुरू गरिएको थियो, र धेरै पछि, छवि XML साइटम्यापहरू विकास गरिएको थियो। यसको प्रारम्भिक चरणहरूमा, एक्सएमएल साइटम्यापले ठूलो साइटहरूका लागि धेरै पृष्ठहरू वा नयाँ साइट ब्रान्डहरूको साथ खोजी इन्जिनहरूलाई यी अनइन्डेक्स नभएका वेबपृष्ठहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा पत्ता लगाउन र क्रल गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
एक्सएमएल साइटम्यापले एसईओ पेशेवरहरूलाई मनपराएको छ Semalt थप डेटाको बिभिन्न प्रकारका साथ हामी त्यहाँ खोज ईन्जिन क्रॉलरहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं। डाटा जस्तै परिवर्तन आवृत्ति परिमार्जित मिति, प्राथमिकता, र अधिक एक्सएमएल साइटम्यापमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
दुःखको कुरा, धेरै एसईओ पेशेवरहरू 'एक' र दैनिक परिवर्तनहरूको लागि प्रत्येक पृष्ठको प्राथमिकता राख्न रुचाउँछन्। के हामीलाई चिन्ताको कारण दिन्छ कि धेरै एसईओ पेशेवरहरू अन्तिम अपडेट गरिएको मिति अपडेट गर्न वास्तवमा खराब छन्। चीजहरू यति नराम्रो भयो कि गुगलले यी क्षेत्रहरू मध्ये धेरैलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ।
नतिजाको रूपमा, XML साइटम्याप Semalt र अन्य SEO पेशेवरहरूको लागि शीर्ष प्राथमिकता बन्न पुग्यो। XML साइटम्याप मध्ये एक भयो हाम्रो अडिट टेम्पलेट र एसईओ चेकलिस्टमा उनीहरूको सबै भन्दा प्राथमिकता प्राथमिकताहरू। यसको प्रासंगिकतामा त्यस्तो वृद्धिसँग, विशेष एसईओ उपकरणहरू XML साइटम्यापहरू सिर्जना र विश्लेषण गर्न मद्दतको लागि सिर्जना गरिएको थियो।
के आजको SEO ब्रह्मांडमा XML साइटम्यापहरू छन्?
उत्तर यो लाग्न सक्ने भन्दा जटिल छ, विशेष गरी किनभने XML साइटम्याप एसईओ को धेरै अन्य पक्षहरु संग काम गर्दछ। लोकप्रिय विश्वासको विपरित, तपाईंको XML साइटम्यापले तपाईंको SEO रैंकिंगलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन।
यदि हामी एक उत्तम संसारमा बाँचिरहेका छौं भने, एक्सएमएल साइटम्याप वेब पृष्ठ वा छविहरूको लागि आवश्यक नहुन सक्छ। एक्सएमएल साइटम्यापहरू वास्तवमै भर्खरको प्राथमिक सहायता हो जुन हामीले ठूला साइटहरूको साथ साझा सबै प्रकारका एसईओ मुद्दाहरूको असंख्यको साथ वेबसाइटहरू प्याच गर्न प्रयोग गर्दछौं। जहाँसम्म, एसईओ सहि तरीकाले गर्नुको मतलब:
तपाईंको साइट सजिलै क्रल गर्न योग्य छ र सहि तरीकाले कोड गरिएको छ ताकि गुगलले तपाईंको सबै आन्तरिक लिंकहरू पत्ता लगाउन सक्दछ।
तपाईंसँग पर्याप्त इनबाउन्ड लिंकहरू पनि छन् त्यसैले खोज इन्जिन वेब क्रलरहरू तपाईंको साइट प्राय: पुन: भ्रमण गर्न सक्दछन्।
यदि तपाईंको साइटले यी दुबै सर्तहरू पूरा गर्दछ, XML साइटम्याप हुनु आवश्यक छैन।
के तपाईंलाई गुगलमा छवि साइटम्याप सबमिट गर्न आवश्यक छ?
यो सबै तपाइँको वेबसाइट अनुकूलित गरिएको छ कसरी राम्रो निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँका छविहरू क्रॉलर-मैत्री तरीकाले कोड गरिएका छन्, र यदि तिनीहरू वेब पृष्ठहरू छन् सजिलै खोज इन्जिन द्वारा अनुक्रमित गर्न सकिन्छ भने, एक छवि साइटम्याप उपेक्षा गर्न सकिन्छ।
जब तपाईं यस पोष्ट पढ्न रोक्न लोभ्याउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एक ठूलो छ, तर सबैलाई, हामीले यति टाढा भनेका छौं।
वास्तविकता के हो भने धेरै छविहरू वेब साइटमा आलस्य रूपमा लोड गरिएको छ जुन सर्च ईन्जिनहरूका लागि तिनीहरूलाई अवलोकन गर्न गाह्रो बनाएको छ। अब, यो त्यस्तो होइन जुन तपाईंको SEO विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई जान्न चाहन्छन्, त्यसैले तिनीहरू सामान्यीकरण गर्छन् र भन्दछ तपाईंको वेबपृष्ठहरू र छविहरू अनुकूलित भएका छन्।
यस समस्यामा थुप्रै फिक्सहरू छन्। हामी ती छविहरूलाई अफलोड गर्न संचयी लेआउट शिफ्ट र अन्य गति मेट्रिक्स प्रयोग गर्न सक्दछौं। यस उदाहरणमा, एउटा छवि साइटम्याप हुनु अनमोल छ किनकि यसले तपाईंको छविहरू फेला पार्छ र खोज परिणामहरूमा श्रेणीकरण गर्दछ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि छवि साइटम्याप प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि तपाइँका छविहरू सीडीएन वा डेम प्रयोग गरेर होस्ट गरिएका छन् भने।
Hreflang अर्को कारण सेतो साइटम्याप यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ धेरै प्राविधिक कारणहरू छन् किन केहि साइटहरूको लागि कोड वा HTTP हेडर स्तरमा hreflang लागू गर्न धेरै गाह्रो छ। भाग्यशाली हाम्रोलागि, खोज इञ्जिनहरूले हामीलाई XML साइटम्याप स्तरमा hreflang कार्यान्वयनको विकल्प प्रदान गरेका छन्। बिभिन्न वेबसाईटहरूले यो विकल्प लाईफसेभर हुन पाए, र यसले अन्ततः उनीहरूको लागि XML साइटम्याप महत्त्वपूर्ण बनायो।
जब XML साइटम्याप प्रयोग गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यसलाई कहिले पनि अपडेट गर्न बिर्सनुहुन्न।
XML साइटम्यापहरू प्रयोग गर्दा तपाईले चिन्नु पर्ने चीजहरू
XML साइटम्यापहरू प्रयोग गर्न समस्याहरूको आफ्नै अनौंठो सेटको साथ आउँदछ, विशेष रूपमा किनभने तिनीहरू केवल अन्य नियमित एसईओ उपकरणहरू जस्ता छन्। उपकरणको रूपमा, तिनीहरूका फाइदाहरू, साथै बेफाइदाहरू, हामी कसरी यिनीहरूको राम्रो प्रयोग गर्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ।
बेसबल ब्याट लिनुहोस्, उदाहरणका लागि, हामी यसलाई हाम्रो ड्याडहरू वा साथीहरूसँग खेल्न प्रयोग गर्न सक्दछौं, वा यो कसैलाई आक्रमण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दुर्भाग्यवस, धेरै SEO पेशेवरहरूले XML साइटम्यापको साथ आफ्ना ग्राहकहरूलाई चोट पुर्‍याउँछन्। हाम्रो ढोकामा हिँडेका धेरै जसो ग्राहकहरूसँग XML साइटम्यापमा विरोधाभासी जानकारी हुन्छ जुन हामी मुख्य साइटमा देख्छौं, जुन सर्च क्रुल्लरहरूको लागि गोलमाल हो।
किन साइट मानचित्रहरू अझै पाल्तु पिव मानिन्छन्?
त्यो सबै भनिएको छ कि साथ, साइटम्यापहरू अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो SEO चिन्ताहरू हुन्। लगभग हरेक चोटि जब हामी अडिट गर्छौं, हामी जहिले पनि XML साइटम्यापको साथ सुरु गर्न रुचाउँछौं। यदि एक वेबसाइट राम्रो रँकिंग छ, त्यहाँ एक साइटम्याप हुनु आवश्यक छैन, त्यसैले हामी यसलाई हराइरहेको साइटम्याप लेबल गर्दछौं। गुगल र बिंगको लागि पहिले नै राम्रो श्रेणीकरण गर्ने वेबसाइटहरूको लागि, साइटम्याप थप्नाले उनीहरूको स्तर सुधार गर्ने छैन किनकि एक्सएमएल साइटम्याप कुनै रैंकिंग संकेत होइन।
के XML साइटम्यापले तपाईंलाई अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ? होइन। सबै साइटहरू पहिले नै गुगल र बिंगमा अनुक्रमित छन्, यसले लेखा परीक्षणमा साइटम्यापलाई प्राथमिकतामा राख्नुको मतलब नै छैन। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, XML साइटम्याप सिर्जना गर्न शाब्दिक रूपमा कुनै लाभ छैन किनभने पृष्ठहरूसँग कुनै अनुक्रमणिका मुद्दाहरू छैनन्।
SEO पेशेवरको हैसियतमा, हामी हाम्रो सूचीको पछाडि सोच्न बाध्य छौं कि हामी हाम्रो ग्राहकको वेबसाइटहरूको लागि सिफारिस गर्छौं वा के गर्छौं त्यहाँ वास्तविक जीवन बेनिफिटहरू छन् कि भनेर। XML साइटम्यापले हामीलाई यस्तो अवस्थामा राख्छ। धेरै वेब पृष्ठहरूको साथ ठूलो साइटका लागि, क्रल सरोकारहरू अनुभव गर्न सामान्य छ, र त्यस्ता अवस्थाहरूमा, XML साइटम्यापले स्थिति प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै अन्य साइटहरूका लागि, हामी अर्को दृष्टिकोण सिफारिस गर्छौं। XML साइटम्याप हुनुको सट्टा, हामी तपाईलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईले हामीलाई क्रल मुद्दा ठीक गर्न अनुमति दिनुहुनेछ र XML साइटम्यापमा भरोसा नगर्नुहोस्।
XML साइटम्यापहरू एक मात्र समाधान छैनन्। यद्यपि तपाईको साइटमा नक्सा छ भनेर जान्न अझ राम्रो हुन्छ यदि तपाईलाई चाहिएको छ भने। सम्झनुहोस् कि तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ Semalt तल सूचीबद्ध विकल्पहरू मध्ये कुनैबाट वा हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं।